Kubalwe isixa zesamente, isanti kunye igrabile yokwenza eziphathekayo
Ubungakanani eziphathekayo E
iingxowa zesamente 1 cubic metre nganye M
isamente : isanti : ilitye bamoya ngokobunzima
Iindleko zezixhobo zokwakha
isamente (ingxowa nganye)
isanti (ton 1)
ilitye bamoya (ton 1)
ulwazi ukubala izinto eziphathekayo
Khankanya ratio efunekayo.
E - Imali efunekayo ngesamente. Oku kubonisiwe cubic.
M - Zingaphi iingxowa zesamente ezifunekayo 1 cubic meter eziphathekayo.
K - Ubunzima lengxowa zesamente. Ngeekhilogram.
Khankanya ixabiso izinto kwingingqi yakho.
Musa ukulibala ukuba kubalwe amaxabiso izinto ezinkulu ngeendleko ngokobunzima, kungekhona ngokomthamo.
Kangakanani kwaye ukuselwa nesamente, isanti kunye igrabile yokwenza eziphathekayo amagaqa engagqibekanga kunikwa reference, njengoko ecetyiswa kubavelisi lwesamente.
Ngokufanayo, ixabiso zesamente, isanti, igrabile kungohluka kakhulu kwimimandla eyahlukeneyo.
Ukwakhiwa umxube ogqityiweyo eziphathekayo kuxhomekeke kwisayizi (neeyantlukwano) ilitye nakhandiweyo igrabile, isamente lophawu, amathayara yayo. Kwakusazeka ukuba ngexesha kuyoluka isamente yokugcina ulahlekelwa iimpawu zayo nomgangatho zesamente yonakaliswa ngokukhawuleza kakhulu kule ukufuma ephakamileyo. Qaphela ukuba iingxowa zesamente anokuyisebenzisa 50 kg abazange olubhaliweyo kuyo. Trust, kodwa uqinisekise. Yimalini zesamente wawathululela itshekhi ilungileyo.
Nceda qaphela ukuba iindleko zesanti ne zegrabile ichazwa yeprogram ton 1. Abathengisi yazise ixabiso ngalinye cubic meter lesanti okanye ilitye nakhandiweyo luhlalu.
ubunzima ezithile njengentlabathi ixhomekeke imvelaphi yayo, umzekelo, intlabathi umlambo inzima kunezo umsebenzi.
Igrabile namatye batyumke. Ngokutsho imithombo eyahlukeneyo 1 cubic ubunzima imitha eqala 1200 ukuya 2500 kg kuxhomekeke iqhezu (ubungakanani). Inzima - ngaphezu embiweyo.
Ngoko ubale iindleko ngetoni nganye zesanti ne zegrabile uya kuba yakho. Okanye ukucacisa nabathengisi.
Nangona kunjalo, ekubaleni nangoku kuyanceda ukuba wazi ukuba uqikelelo lweendleko zokwakha izixhobo nawokulungiselela isixa ozifunayo ngesamente.